एनआरएनए निर्वाचन : अमेरिका क्षेत्रिय संयोजकमा डा‍. विनोद शाह र राजन त्रिपाठीको भिड्न्त, नविन शेरचनले उमेदवारी दिएनन् - Durbin Nepal News
दूरबिन नेपाल २९ आश्विन २०७६, बुधबार १२:०९
काठमाडौं, असोज २९ । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको निर्वाचनमा अमेरिका क्षेत्रिय संयोजक (आरसी) मा दुई जनाको भिड्न्त हुने भएको छ । लामो समय देखि आरसी पदमा उमेदवार घोषणा गरेका वर्तमान उप -संयोजक (डिआरसी) नविन शेरचनले अन्तिम समयमा उमेदवारी दर्ता नै गरेनन् ।
एनआरएनए निर्वाचनको अन्तिम नामावाली प्रकाशनमा अमेरिकाज क्षेत्रको आरसीमा डाक्टर विनोदप्रसाद शाह र राजन त्रिपाठीको मात्र उमेदवारी परेको जनाइएको छ । शेरचनले डा. शाहलाई समर्थन गरेको जनाइएको छ । शाह लामो समय देखि न्युयोर्क कार्यक्षेत्र बनाउदै आएका व्यक्तिहुन् । यस्तै त्रिपाठी डिसी मेट्रो क्षेत्रका बासिन्दा हुन् ।
अमेरिका क्षेत्रको डिआरसीमा राम सी पोखरेल र अभिमन्यू बस्नेतको उम्मेदवारी परेको छ । यस्तै महिला संयोजकमा राधाकुमारी पौडेल र उमा कार्की थापाको उम्मेदवारी परेको छ । क्षेत्रीय युवा संयोजकमा भने विमला सापकोटा निर्विरोध भएकी छन् ।
मध्यपूर्वको आरसीमा प्रविन गुरुङ र दुई जना डिआरसी रहने सो क्षेत्रमा राजेन्द्र अर्याल र मनोजकुमार श्रेष्ठ निर्विरोध चयन भएका छन् । महिला संयोजकमा सुमित्रादेवी पौडेल पनि निर्विरोध चयन भएकी छन् ।
युरोप क्षेत्रको आरसीमा सन्तोषकुमार भट्टराई, पदम गुरुङ, गंगाधर गौतम र नारायणप्रसाद आचार्यको उम्मेदवारी परेको छ । अफ्रिकाको आरसीमा रोशन थापा निर्विरोध चयन भएका छन् । अफ्रिकाक्षेत्रको महिला संयोजकमा मनकला थापा विष्ट निर्विरोध भएकी छिन् । सो क्षेत्रको डिआरसी र युवा संयोजकमा उमेदवारी नै परेको छैन ।
यस्तै एशिया प्रशान्त क्षेत्रको आरसीमा गोविन्द श्रेष्ठ, आविज गुरुङ र केपी सिटौलाको उम्मेदवारी परेको छ । डिआरसीमा पारसमणि पोखरेल, टंकप्रसाद गैरे, खगेन्द्र न्यौपाने र विनोद कुँवरको उम्मेवदारी परेको छ । महिला संयोजकमा अमृता थापा निर्विरोध चयन भएकी छन् । युवा संयोजकमा मिलन घिमिरे र दीपकप्रसाद कँडेलको उम्मेदवारी परेको छ ।
ओसेनिया क्षेत्रको आरसीमा होमनाथ पाण्डे र दिनेशराज जोशीको उम्मेदवारी परेको छ । डिआरसीमा हरि राम्जाली र नवीन कँडेलको उम्मेदवारी परेको छ । महिला संयोजकमा जानकी पौडेल र युवा संयोजकमा राजकुमार थपिलया निर्विरोध चयन भएका छन् ।
२९ आश्विन २०७६, बुधबार १२:०९ मा प्रकाशित